B2B အရောင်းပိုမိုများပြားစေရန်သင်၏အွန်လိုင်းသင်တန်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စတင်ခြင်း Martech Zone
သောကြာနေ့, ဧပြီ 10, 2020 သောကြာနေ့, ဧပြီ 10, 2020 Micheal Habiger
တစ် ဦး မှတဆင့်ငွေရှာအမြတ်အစွန်းအများဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု အွန်လိုင်းသင်တန်း သို့မဟုတ် eCourse ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုသင်၏သတင်းလွှာကိုရယူရန်နှင့်ရောင်းအားသို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် B2B ၀ ယ်ယူသူများကို ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အခမဲ့၊ တိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် ebooks, white pages သို့မဟုတ်အခြားမက်လုံးများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအကျိုးအမြတ်ရှိသောအွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားလိုက်ပြီ၊ သင့်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းများသည်အလားအလာကောင်းများကိုအမြတ်အစွန်းများသောရောင်း ၀ ယ်မှုသို့ချန်လှပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရောင်းအားကိုပြုလုပ်ရန်အလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပဲသင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးနိုင်သည်။
မည်သည့်အရာကိုသင်ကြားရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း - စာသင်ခန်းတစ်ခုတွင်သင်ကြားသည့်အခါဥပမာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကိရိယာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်အားထက်သန်သောအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၌ကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ်ရှိရန်သင်ကြားပေးခြင်းသည်ကောင်း၏။
သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ - လူတိုင်းကအဲဒါကိုရှာနေတာ လမ်းမြေပုံတစ်ခု ဒါကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးဖြစ်စေဖြစ်စေသူတို့သည်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာပေးနိုင်သည့်အဖြေများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ရလဒ်များကိုရှာဖွေလိုကြသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းသင်တန်းကတိထားသည့်ရလဒ်ကိုဝယ်ယူသူကရှင်းလင်းသောဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသင့်သည်။
သင်လိုချင်သောအဆုံးရလဒ်ကိုဖော်ပြသည့်သင်၏အွန်လိုင်းသင်တန်းအတွက်နာမည်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ ရလဒ်သည်သင်၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အရောင်းအပြောင်းအလဲများကိုတိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ -“ သင်၏ပထမဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကိုတစ်ပတ်အတွင်းမရောင်းပါနှင့်” ကဲ့သို့သောသင်တန်းခေါင်းစဉ်သည်“ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်နည်း” ထက်ပိုကောင်းသောရလဒ်များရလိမ့်မည်။
သင်၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ပါ - သင်၏ထုတ်ကုန်ကိုသီးခြားစိတ်ဝင်စားမှု (သို့) လူအုပ်စုတစ်စုသို့သင်ကမ်းလှမ်းချင်ပါသလား။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်သည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလုပ်ကိုင်နေသူလား၊ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေသို့မဟုတ်အခြားပညာရှင်များလား။ ယခုအချိန်တွင်သင်မည်သည့်ဖောက်သည်အမျိုးအစားကိုသင့်သင်တန်းသို့ဆွဲဆောင်ချင်သနည်းဟုမေးမြန်းရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်ကိုတန်ဖိုးထားသောဘာသာရပ်များနှင့်ခေါင်းစဉ်များအကြမ်းဖျင်းရေးဆွဲပါ။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသင်တန်းအကြံဥာဏ်များတွင် -
ရောင်းအားနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှုန်းကိုသက်သေပြပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စဉ်များ (သို့) တင်းပလိတ်များ။
စျေးနှုန်း - စျေးနှုန်းနှင့်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်ကမ်းလှမ်းသောအဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ၀ ယ်သူအချို့သည်သင်ပိုမိုနည်းသောနှုန်းထားကိုသတ်မှတ်ထားပါက၎င်းကိုပေးသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုပေးပါလိမ့်မည်။ သင်အမြဲလုပ်နိုင်တယ် စျေးကွက်သည်းခံမည်အဘယ်အရာကိုကြည့်ပါ.
သင်တုန့်ပြန်လိုသောဆန္ဒမရရှိပါကသင်၏စျေးနှုန်းကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ် ၀ ယ်သူများကိုအရောင်းကောင်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရက် ၃၀ အတွက်အခမဲ့ပါဝင်ပြီးသင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းနှင့်အပိုထပ်ဆောင်းအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုရောင်းချခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး ကသင့်အားယုံကြည်သင့်ကြောင်းပြသခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်သောအခမဲ့သတင်းအချက်အလက် ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးခန်း၊ အီးမေးလ်သတင်းလွှာ၊ eBook သို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာစသည့်အခါ ၀ ယ်သူသည်၎င်းတို့အတွက်အဖိုးတန်သောအရာများကိုရှာဖွေနိုင်သည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။
ကန ဦး စာရင်းသွင်းစဉ်အတွင်းသင်လုပ်နိုင်သည် စစ်တမ်းကောက်ယူသူများ သူတို့အနေဖြင့်မည်သည့်အရာသည်စိတ် ၀ င်စားသည်ကိုရှာဖွေပြီးသင်တန်းကာလအတွင်းနှင့်ပြီးနောက်သူတို့၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်။ သင်၏အီးမေးလ်အဆက်အသွယ်များကိုခြေရာခံခြင်းကဲ့သို့သောအလုပ်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအီးမေးလ်နောက်ဆက်တွဲကိရိယာများစွာရှိသည်။ သင်သည်သူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာသာမကနာမည်နှင့်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနယ်ပယ်များကိုပါထည့်သွင်းရန်လျင်မြန်သည့် sign-up ပုံစံတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ခေတ်သစ် အီးမေးလ်အလိုအလျောက် tool ကိုတက်နောက်ဆက်တွဲဥပမာအားဖြင့်၊ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌သင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်၏အွန်လိုင်းသင်တန်းနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏စျေးကွက်ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်၊ သင်နှင့်လက်ရှိဖောက်သည်များကသင်ကမ်းလှမ်းသည့်အရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမည့်အတိုင်းအတာအထိယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
နောက်ဆက်တွဲကိရိယာများသည်သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုအပိုဆောင်းအကြောင်းအရာများနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာစေရန်နှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိသောနှင့်လက်ရှိဖောက်သည်နှစ် ဦး စလုံး၏အစစ်အမှန်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုရောင်းရန်၊ ရောင်းရန်ကိုပိတ်ရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားရန်အတွက်သင်၌တန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်အင်အားအကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုတည်ဆောက်ပါ သင့်အားအီးမေးလ်လိပ်စာပေးရန်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များရရှိစေမည့် ဦး ဆောင်သည့်သံလိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်စာရင်းပြုစုပါ။
သူတို့ကိုအခမဲ့ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက်စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားသင်ကမ်းလှမ်းသောအရာများကိုပိုမို ပေး၍ အရောင်းအ ၀ ယ်မှတဆင့်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသို့ပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အားသူတို့၏အီးမေးလ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပိုပေးစေလိမ့်မည် -
သင်၏သင်တန်းကို ၀ ယ်ယူခဲ့သောအခြားသူများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များနှင့်ယင်းကိုရယူခြင်းဖြင့်ရရှိသောရလဒ်များကို။
သင်၏အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုတက်ရောက်သည့်အခါသင်၏အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူမျှော်လင့်နိုင်သည့်သင်တန်းရလဒ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
Follow Up Fred အကြောင်း
Follow Up Fred သည်သင်မပြန်သောသူအားသတိပေးအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးခြင်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သော chrome extension ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ၎င်းကိုဖွင့်ပြီး Follow Up Fred ကိုသင့်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်သမျှလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကနောက်လိုက်လိုက်လျှင်သင်ပြန်ကြား။ ရောင်းရန်နီးကပ်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Follow Up ကိုအခမဲ့ရယူပါ
Micheal Habiger သည် ၆ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသောစာရေးဆရာနှင့်စျေးကွက်သမားဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်အကြီးတန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုမှာ နောက်ဆက်တွဲ.
အိုင်းစတိုင်း: Salesforce ၏ AI ဖြေရှင်းချက်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရောင်းအားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမည်သို့မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်